के हो एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी ,जसले ज्याननै लिन सक्छ ? - Ankuran Khabar
Wed, Aug 12, 2020 / २०७७ श्रावण २८, बुधबार
कान्तिपुर दैनिकका पत्रकार बानियाँ तीन दिनदेखि बेपत्ता, खोजतलासका लागि प्रहरीमा न... २०७७ श्रावण २८
विश्वकप छनोट खेल एक वर्षका लागि स्थगित... २०७७ श्रावण २८
सल्यानमा १२ वर्षीया बालिकालाई विवाह गर्छु भन्दै करणी गर्ने एक जना पक्राउ... २०७७ श्रावण २८
प्रचण्ड निवासका थप २ जनामा देखियो कोरोना संक्रमण... २०७७ श्रावण २८
अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस : भिडियो कन्फरेन्स मार्फत प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन ... २०७७ श्रावण २८
२०७६ माघ २0
अझै पनि धेरै मानिसलाई थाँहा छैन एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी अर्थात पाठेघर बाहिर बच्चा बस्ने समस्याको बारेमा । थोरै मात्र असावधानी अप्नाए ज्याननै जान सक्ने यो समस्या पछिल्ला केही वर्षयता निकै बढेको पाइन्छ । के हो एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी ? कसरी यस्तो हुन्छ र अप्नाउनुपर्ने साबधानीको बारेमा अंकुरण खबरका लागि स्त्री तथा प्रसुतिरोग विशेषज्ञ डा. माला श्रेष्ठ यसो भन्छिन् …
एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी भनेको के हो ?
एक्टोपिक शब्द भनेकै असामान्य भन्ने हुन्छ । पाठेघरभित्र बच्चा नबसेर बाहिर बस्नुलाई एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी भनिन्छ । एक्टोपिक प्रेग्नेन्सीमा ९० प्रतिशतको बच्चा पाठेघरको नली वा ट्युवमा बस्छ । कसैकसैमा पेट भित्र पनि बस्न सक्छ ।
कस्ता महिलामा यस्तो समस्या बढी आउँछ ?
गर्भधारण भैसकेपछि शुक्रकिट पाठेघरको नली हुदै पाठेघर भित्र जान्छ । तर जो महिलामा पाठेघर या यी अंगमा संक्रमण छ भने बाटोमा अबरोध हुन्छ र शुक्रकिट सहजै पाठेघर भित्र छिर्न पाउदैन् । त्यसले गर्दा मुखमा नै बस्छ । विशेषतः
१. पाठेघरको पहिला संक्रमण भएर ट्युबमा क्षति भए ।
२.ट्युब,पेट तथा तल्लो पेटको पहिला शल्यक्रिया भए ।
३. बाँझोपनको उपचारबाट गर्भ रहेकोभए ।
४.पहिले पनि पाठेघर बाहिर गर्भ रहेको भए ।
५. गर्भ निरोधक साधान कपर टीको प्रयोग ।
६.ढिलो विवाह गरेका महिलामा यस्तो समस्या बढी हुन्छ ।
यसका लक्षणहरु के कस्ता देखा पर्छन् :
१.महिनावारी रोकिने ।
२.पेट दुख्ने ।
३.योनीबाट रगत जाने ।
४. वाकवाक लाग्ने ।
५. बेहोस हुने हुन्छ ।
एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी भएको कसरी थाँहा पाउँने ?
यस्तो समस्या छ वा छैन भनेर सबै भन्दा पहिला नियमित महिनावारी रोकिने वित्तिकै वा गर्भ रहेको थाँहा पाउने वित्तिकै विशेषज्ञकोमा परीक्षण गराउनु पर्छ । भिडियो एक्सरे गरेर हेरेपछि मात्र यसको एकीन गर्न सकिन्छ । तर धेरै महिलाले पछिसम्म पनि स्वास्थ परीक्षण गरेको पाइदैन् । यो एकदमै गलत कुरा हो । यसले गर्भवतीको ज्याननै जाने खतरा समेत हुनसक्छ ।
बच्चा रहेको ठाँउ फुट्यो भने के हुन्छ ?
बेहोस हुने ।
कसैलाई चक्कर लाग्ने ।
बढी ब्लिडिङ भैरहने ।
प्रेसर कम हुने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा समयमै सल्यक्रिया गरिएन भने मृत्यु समेत हुनसक्छ ।
पटक पटक एक्टोपिक भयो भने बच्चा जन्माउन सकिन्छ की सकिदैन् ?
एक्टोपिक भयो भन्दैमा बच्चा नै पाउन सकिँदैन भन्ने होइन । यदि सल्यक्रिया गर्नुपरे पनि एउटा ट्युव हुन्छ । ट्युव र ओभरी दुईवटा हुने भएकाले ट्युव एउटा निकाले पनि बच्चा बस्छ तर चिकित्सकको निगरानीमा रहनुपर्छ।
१.गर्भ फुटेको छ भने रगतको व्यवस्था गरी तुरुन्त शल्यक्रिया गर्नुपर्छ । ल्याप्रोस्कोपीको माध्यमबाट पनि गर्न सकिन्छ ।
२. गर्भ फुटेको छैन भने त्यसको आकार, बिरामीको अवस्था र रिपोर्टहरु हेरेर केही समय पर्खिन पनि सकिन्छ र औषधिबाट पनि गर्न सकिन्छ तर यो भने बिरामीको अवस्थामा भर पर्छ ।
(डा. श्रेष्ठ ईसान बाल तथा महिला अस्पतालमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)
प्रहरीलाई गाली गरेको भिडियो भाइरल : गायिका आस्था राउतले मागिन माफी
ओली-दाहालबीचको छलफल सकियो, शुक्रबार सभामुख टुंग्याइने
समाचार कान्तिपुर दैनिकका पत्रकार बानियाँ तीन दिनदेखि बेपत्ता, खोजतलासका लागि प्रहरीमा निवेदन
खेलकुद विश्वकप छनोट खेल एक वर्षका लागि स्थगित
स्थानीय सल्यानमा १२ वर्षीया बालिकालाई विवाह गर्छु भन्दै करणी गर्ने एक जना पक्राउ
Breaking News प्रचण्ड निवासका थप २ जनामा देखियो कोरोना संक्रमण
Breaking News अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस : भिडियो कन्फरेन्स मार्फत प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गर्ने